Umkhuleko kuSanta Ignatius kaLoyola. ? Ukuxosha Abantu Nezitha
Umkhuleko kuSanta Ignatius waseLoyola Kunamandla amakhulu kusukela selokhu alapha emhlabeni into esemqoka kuye kwakuwukuhlala ekholwa futhi esiza abanye.
Lokhu yingakho azuza izinto ezinkulu ngaphandle kokuba yikholwa elishisekayo lezwi likaNkulunkulu futhi enze imfundiso yobuKristu. Kwakuyilo kholo olunamandla olwaluhlale lunalo olwasiza waze waphela umoya wakhe wokugcina ukwenza intando yeNkosi.
Manje useyingcwele eshayiwe futhi eyenziwe njengoMthetho yiSonto LamaKatolika ngenxa yezimangaliso ezinkulu ayemnika zona yize esephumile kulomhlaba.
Inceku yezwi likaNkulunkulu wokudala okuthi namuhla ibe ngumlingani wethu wokusisiza ezimeni ezimbi.
Noma ngabe sidinga siphi isidingo, impela uSan Ignacio de Loyola unosizo ezandleni zakhe ukusinikeza.
1 Umkhuleko weSanta Ignatius kaLoyola Ubani?
1.1 Umkhuleko kaSanta Ignatius waseLoyola wokugcina abantu bengekho
1.2 Umkhuleko kuSanta Ignatius weLoyola ngokumelene nezitha
1.3 Umkhuleko wokuvikela
1.4 Ukugwema omakhelwane ababi
Umkhuleko weSanta Ignatius kaLoyola Ubani?
Umlando usitshela ukuthi u-Ignacio de Loyola wazalwa ngonyaka we-1491. Wenza umsebenzi wezempi njengoba kwakuyisiko lomndeni wakhe. Kodwa-ke, wezwa ukulimala okwamvimbela ukuthi aqhubeke nezifundo zakhe zempi futhi ngenxa yalokho waqala ukuba yikholwa elithembekile lokholo lobuKristu.
Uqale ukwenza ezinye iziphephelo ezingokomoya futhi wanquma ukufaka ezinye izivivinyo ngaphezulu kuqeqesho futhi kulapho eqala khona ukugxekwa abanye abalandela imodeli eyodwa yokuqeqesha. Ngemuva kwezinqubo eziningi obekumele zidlule zaqala nge Inkampani KaJesu okuyisidalwa esenyukayo namuhla kusebenza kukho konke el mundo.
Ushonele ngaphakathi amaRom Ngo-1556 kwathi lapho eshaywa ngo-1609 wabe eseqokwa ngo-1922. Wanikezwa ngoJulayi 31 ukugubha usuku lokuzalwa kwakhe futhi ukhunjulwa emhlabeni wonke.
Umkhuleko kaSanta Ignatius waseLoyola wokugcina abantu bengekho
O! Ntombi Engcwelengcwele, umama ophakanyisiwe futhi osezulwini, owakhuthaza ngokukhanya kukamama wakho uSanta Ignatius waseLoyola, ukulandela indlela yenkonzo yobupristi, ukunikela impilo yakhe ngengokomoya lakhe ukukhonza, njengomsebenzi nesibonelo, esintwini , Ngiyakucela, ngokuzithoba, ungixolele amaphutha ami futhi ungivumele, ngokuzinikela okukhulu engikusho kuwe, ukuthi uSanta Ignatius waseLoyola angivikele, amandla Ngokukholwa, ngisusa abantu endaweni yami abafuna ukungiletha okubi kuphela, ngiyakuncenga ukuthi ubagcine eceleni kwami ​​ubazise ukuthi kungcono benze okuhle. Amen.
Uma ufuna ukuhambisa abantu kude, Lona ngumkhuleko ofanele weSanta Ignatius waseLoyola.
Esedlule eSan Ignacio de Loyola ngokushushiswa kaningi ngenxa yokholo lwakhe, waba ngumsindisi.
Unamandla, ulwa futhi, kuze kube namuhla, uyisibonelo sobungcwele yize kunezimo eziningi. Angasisiza sime siqine ezimweni ezinzima.
Noma kungabaxosha abantu abacasulayo, amandla amabi, izimo ezimbi noma yini entshontsha ukuthula kwethu.
Kumele ukholelwe nje ukuthi unamandla okusikhulumela phambi kobaba osezulwini ngakho-ke leso simo noma umuntu usuka ezimpilweni zethu ngokuphelele.
Umkhuleko kuSanta Ignatius weLoyola ngokumelene nezitha
Ubaba oNgcwele kakhulu uSanta Ignatius waseLoyola, umsunguli weNhlangano KaJesu; kukhethwe phakathi kwezinkulungwane ukusabalalisa inkazimulo kaNkulunkulu emagumbini amane omhlaba; indoda evelele kunazo zonke izinhlobo zobuhle ...
Kepha ikakhulukazi ekuhlanzekeni kwenhloso obukade ulangazelela ngayo inkazimulo enkulu kaNkulunkulu; iqhawe elihloniphekile lokuphenduka, ukuthobeka nokuqonda; engakhathali, engaguquguquki, ezinikele kakhulu, ethandekayo kakhulu; wokupha okuhle kakhulu kuNkulunkulu, wokholo oluphilayo nethemba eliqinile ...
Ngiyajabula, Baba othandekayo, ukukubona ucebile ngezinto eziningi kangaka futhi ezivelele kangaka, futhi ngiyakuncenga ukuthi ufinyelele kuzo zonke izingane zakho lowo moya owakukhuthaza, futhi kimi inhloso enjalo, yokuthi ngisho nasezintweni ezincane ngifuna inkazimulo yaphezulu, ngilingisa okwakho, futhi ngale ndlela ngikwazile ukuba phakathi kwakho nenkazimulo.
Thandaza umkhuleko weSanta Ignatius waseLoyola ngokumelene nezitha ngokukholwa okukhulu.
Izitha zaba khona kusukela ekuqaleni kokudalwa futhi uSan Ignacio de Loyola wayenazo futhi weza enqoba kuzo zonke izimo adlula kuzo, akukho lula kuzo.
Lokhu yingakho ngimbuza ikakhulukazi emshweni ngokumelene nezitha USanta Ignatius waseLoyola angasisiza ukuthi sixazulule izimo eziningi okunokuba nzima ukuzinqoba ngokomuntu.
Imikhuleko kwenziwa ngokholo kunamandla futhi uma izinhloso zinhle nomkhuleko uqhuma njengokukhala okuvela kumiphefumulo oswele akukho okungalethwa kithi.
Udumo luka-Ignatius waseLoyola, umsunguli we-Society of Jesus kanye nommeli okhethekile nomvikeli wami!
Njengoba uphakeme kakhulu eZulwini ngokwenza imisebenzi yakho ekudumiseni nasenkazimulweni enkulu kaNkulunkulu, ulwa nezitha zeSonto, uvikela ukholo lwethu olungcwele, ulukhulisa ngezingane zakho emhlabeni wonke ...
Ngifinyelele kokuhlonishwa kwaphezulu, ngobuhle obungenakuphela bukaJesu Kristu, kanye nokunxusa kukaMama wakhe okhazimulayo, ukuthethelelwa ngokuphelele kwezono zami, usizo olusebenzayo lokuthanda uNkulunkulu nokumkhonza ngayo yonke imizamo kusuka manje, ukuqina nobungqabavu endleleni yobuhle, kanye nenjabulo yokushona ebunganeni bakhe nasemseni wakhe, ukumbona, ukumthanda, ukumjabulisa nokumkhombisa enkampanini yakho kuwo wonke amakhulu eminyaka.
Ngabe uwuthande umthandazo wokuvikela weSan Ignacio de Loyola?
Wayekwazi ukugcina nokuvikela ukholo nezinkolelo zakhe ngisho nasezikhathini ezimbi kakhulu futhi lokhu kumenza abe ngumvikeli webandla lobuKhrestu.
Kuyena singaphakamisa imithandazo yethu kuye cela ukuvikelwa ezikhathini ezinzima kungaba yithi noma yomndeni wethu uwonke.
Zonke lezo zimo ezisenza singaphumeleli kufanele sishiywe phambi kobuso bakhe ukuze asisize.
Ukugwema omakhelwane ababi
USanta Ignatius waseLoyola, usanta othembekile wokholo lwama Katolika, owamvikela ekubumbeni okungenasisekelo, ekuhlubukeni nasebuqilini bokuzenzisa, wokuthi ngenxa yokwakhiwa kobuKatolika, ngicela ungisuse kimi, njengoba wena nabafundi bakho abathembekile abangamaJesuit abagqugquzela ukuwohloka kwabo phezu kwebandla, ngiyakuncenga, susa eceleni kwami ​​abantu bokuphila okubi, xosha omakhelwane ababi, susa izitha zami endleleni yami, u-Ignatius waseLoyola, ozinikele ngokungcwele kuJesu Kristu, ebuhleni bakho nase Ngiyathumela. Amen.
Uma ufuna ukuxosha omakhelwane ababi, kufanele uthandaze ku-Saint Ignatius waseLoyola.
Omakhelwane, ezikhathini eziningi, baba umndeni wethu ngoba ezimweni eziningi yibo abasondele kakhulu kithi.
Lokhu kungaba yinto enhle, ngoba ukuba nomuntu osondelene nawe akukhona, kepha lapho bengomakhelwane ababi, konke kuba yinkimbinkimbi. Yibo labo bantu aba izitha zethu futhi ngazo zonke izikhathi benza izimpilo zethu zingabikhona.
Thandaza, kufanele ngaso sonke isikhathi kube ukuzivikela kwethu kuphela kulezo zimo esingazi kahle ukuthi sizokwenzenjani.
USanta Ignatius weLoyola ungasisiza ukuthi sivikele labo makhelwane ababi aseze aguqula ukuthula kwezimpilo zethu nabo bonke abasizungezile.
Amathonya amabi agcwalisa wonke umphakathi ngamandla amabi okufanele sihambele kuwo ngaphambi kokuthi abangele ukulimala okuningi kuyo yonke imvelo yokuvumelana.
Kufanele Bacele ukuba basuke ngaphandle kokudala umonakalo, ngaphandle kokushiya amandla abo futhi basuse wonke amandla amabi, umthandazo onamandla ozosisiza ngaso sonke isikhathi.
Ungakwazi futhi kufanele.
Udinga nje ukuba nokholo enhliziyweni yakho. Ukukholwa kuzokwenza bonke basebenze.
Kufanele sikholelwe njalo emandleni eSt Ignatius womkhuleko kaLoyola ukuvimba abantu kanye nezitha.
Ngakho-ke, ungaqiniseka ukuthi uzohlala uluthola usizo lwaphezulu.